Dib -u -eegista Caymiska Cad -cad Sannadka 2021 - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn Dib -u -eegista Caymiska Cad -cad Sannadka 2021 -ka
isha sawirka: www.pixabay.com
Baabuurtu waa mid ka mid ah hantida qiimaha leh ee bani -aadamka mana samayn karno la'aantood. Taasi waa sababta ay u baahan yihiin in la daryeelo. Waxaad timid dhammaadkii raadintaada shirkad caymis baabuur sababta oo ah daboolka cad ayaa ku daboolay
Runtii, magaceedii ayay ku noolayd. Ikhtiyaarada daboolida caymiska ee Clearcover ayaa u cad sida maalinta. Ma aha oo kaliya mid waxtar leh laakiin sidoo kale waa sahlan tahay in la fahmo. U oggolow macaamilka inuu kula wadaago dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ogaato.
In kastoo, aysan ahayn ikhtiyaarka ugu jaban. Clearcover wuxuu ku faanaa 93% qiimeynta qanacsanaanta macmiilka iyo inuu awood u yeesho inuu bixiyo hal maalin ama laba maalmood.
Waa maxay Caymiska Daboolida
Clearcover waa shirkad caymis baabuur oo bilow ah oo adeegyadeeda ku fidisa in ka badan 15 gobol oo ay ku jiraan California, Texas, iyo Illinois. Waxaa la aasaasay 2016, oo ay sameeyeen Kyle nakatsuji iyo Derek Brigham.
Daboolka cad wuxuu aad ugu fiican yahay macaamiisha raadinaya shirkad caymis baabuur oo dhijitaal ah.
Shirkaddu waxay bixisaa astaamo khadka tooska ah u leh isticmaale-yaasha waxayna awood u leedahay inay soo saarto lacag-sheegasho u-qalmitaan 3 daqiiqo gudahood.
Caymiska Dabooliddu Waa Sharci Mise Waa Been Abuur
Clearcover wuxuu hadda ka shaqeeyaa 16 Gobol iyo siyaasadiisa waxaa taageera bixiyaha aadka loo qiimeeyo Fortegra iyo kaabayaasheeda Lyndon Southern iyo Response Indemnity Company of California.
Daboolku wuxuu u fiican yahay macaamiisha casriga ah ee yaqaana sida loo maareeyo taleefannadooda casriga ah maxaa yeelay daboolka cad wuxuu ku xiran yahay farsamada inta badan shaqadiisa waxayna u noqon kartaa fikrad aad u xun macaamiisha doorbida shirkad caymis fool-ka-fool ah ama xannibaad iyo leben.
Caddeyntu waxay ku bixisaa kharash yar ama shaqaaleynta suuqgeynta iyo kaabayaasha jirka sidaas darteedna waxay leedahay kheyraad ku filan si loo bixiyo caymis la awoodi karo oo hufan.
Akhri: Hagahaaga Tallaabo-tallaabo ah ee Doorashada Qorshaha Caymiska Caafimaadka
Dib-u-eegista Caymiska Cad-sidee buu u shaqeeyaa?
Clearcover wuxuu u taagan yahay waayo-aragnimadiisa dhijitaalka ah ee ugu sarreysa. Helitaanka xigasho waxay qaadataa dhowr daqiiqo oo barnaamijkeeda moobiilku wuxuu leeyahay sumcad aad u fudud oo sax ah.
Waxaa laga heli karaa Arizona, California, Georgia, Illinois Indiana, Louisiana, Maryland, Missouri, Nebraska Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, Utah Wisconsin. Daboolida daboolku waa ikhtiyaar aad u yar marka la barbar dhigo baakadaha waaweyn ee caymis ikhtiyaari ah oo laga heli karo caymis aad u weyn.
Waxaa jira caymis gaadiid oo lagu bixiyo meeshii caymiska baabuurka kirada ah. Caymiskan, daboolka cad wuxuu ku siin doonaa lacag aad u isticmaasho sidaad dareento inaad taam tahay mar kasta oo baabuurkaaga la hagaajiyo.
Clearcover si cad oo si kooban u macneeya macluumaadka macaamiisha. Markaa macmiisha cusubi waxay garan karaan oo fahmi karaan caymiska ay u baahan karaan.
Shirkadu waxay bixisaa xigashooyin onlayn ah, waxayna leedahay barnaamij casri ah, oo labaduba ay fududahay in la isticmaalo.
Si kastaba ha ahaatee, habsocodku waa wax yar oo wareerinaya hawlo badan oo muhiim ah oo la xiriira siyaasadda caymiska baabuurkaaga waxaa kaliya lagu samayn karaa mareegaha ama app -ka, laakiin labaduba ma aha. Iyo taleefanka casriga ah marka ay timaaddo daboolka cad waa lama huraan maxaa yeelay ma awoodi doontid inaad is qorto mid la'aan
Caymis-ku-ahaan-onlayn kaliya ah, Clearcover ma isticmaasho wakiillada caymiska. Qofna kulama kulmi kartid Clearcover shaqsi ahaan. Si kastaba ha ahaatee, adeeggeeda macmiilku wuxuu helaa dib -u -eegid wanaagsan. Kooxdeeda waxaa kaliya laga heli karaa taleefanka laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 9 galabnimo Waqtiga Dhexe maalmaha shaqada, laakiin macaamiisha ayaa codsi ku soo gudbin kara barnaamijka 24 saac maalintii.
Hal arrin oo laga yaabo inay la timaaddo Clearcover waa diiwaankeeda raad -raaca oo kooban. Shirkadu waxay bilowday iibinta caymiska bishii Febraayo 2018.
Marka la eego sida ay muhiimka ugu tahay in siyaasaddaada caymisku noqoto mid la isku haleyn karo, waxaa jira faa'iidooyin la hubo marka la dooranayo caymis muujinaya xasilloonida maaliyadeed iyo kartida ay u leeyihiin cimilada aafooyinka waaweyn ee la soo dhaafay.
Galitaanka dhowaan ee Clearcover ee warshadaha caymiska micnaheedu waa in qaybo ka mid ah siyaasadeeda ay arki karaan isbeddel weyn waqti dhow.
Siyaasadaha caymiska baabuurka ee ay bixiso Clearcover waxaa ka mid ah dhammaan sifooyinka aad ka filan karto siyaasadda caadiga ah, sida:
Caymiska dhaawaca hantida
Ilaalinta wadayaasha aan caymis lahayn/aan caymis lahayn
Intaa waxaa dheer, Clearcover wuxuu kaloo leeyahay dhowr oggolaansho oo waxtar leh, oo ay ka mid yihiin:
Caymis gaadiid oo kale
Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Caymiska Qarsoon
Barta wax -iibinta ee shirkadu waa mid ka caqli badan, dhaqso badan, iyo caymis baabuur oo ka raqiisan farahaaga, iyadoo aan loo eegin baahiyahaaga. Sababtoo ah Clearcover waxay ku xirantahay farsamada shaqada inteeda badan, qaababkeeda qaarkood si fiican ulama fadhiyaan macaamiisha.
Aynu eegno qaar ka mid ah kuwa wanaagsan iyo kuwa xun ee dib u eegista caymiska Clearcover.
Maadaama ay shirkadu internetka tahay oo aysan jirin dhismayaal la booqdo, ma jirto wax loo adeegsado wakiillada taasina waxay noqon kartaa macaamiil hoos u dhaca, oo laga cabsado.
Waxa kaliya oo lagu hawlgelin karaa taleefanka casriga ah sidan ayaad u soo dejisan kartaa barnaamijka moobiilka laakiin iyada oo aan lahayn casriga, ma jiro caymis dabool oo cad.
Clearcover waa shirkad caymis baabuur oo adag. Noocyada kale ee caymiska lama hayo
Lagama heli karo gobolka oo dhan
Waxay leeyihiin adeeg macmiil oo weyn iyo isgaarsiin
Ku qanacsanaanta macaamilka ayaa ah mudnaanta koowaad
Iyada oo leh Clearcover waxaad kaydin kartaa lacag badan
Qaabka ugu dhaqsaha badan ee loo xareeyo sheegasho
App si fudud ayaa loo heli karaa
Waxay bixisaa caymis wadaag wadaha
Clearcover waxay qaadataa hab liddi ku ah qiima dhimista marka la barbar dhigo caymisyada kale. si cad uma soo bandhigto.
Inta badan shirkadaha caymiska baabuurtu waxay kuu sheegaan marka ay ku siinayaan qiimo dhimis waxyaabaha sida wadista badbaadada leh iyo caymiska baabuurta badan.
Clearcover wuxuu weli tixgeliyaa dhammaan faahfaahinta la mid ah caymis guud marka la dejinayo sicirkaaga, laakiin ma aragtid shuruudaha gaarka ah ee ay u isticmaasho dejinta sicirkaaga.
Clearcover sidoo kale waxay iibisaa caymiska baabuurka. Kama iibsan kartid shirkadda kireystayaal, mulkiileyaal guri, ama caymis dallad. Haddii caymiyahaagu ku siiyo qiimo dhimis macno leh si aad iskugu duubto siyaasadahaaga, waxaa laga yaabaa inaad meel kale lacag ku kaydsato.
Hoos waxaa ah qiimo dhimisyada la bixiyay
Sicir-dhimis ammaan-wadid ah.
Sicir -dhimista bixinta hore ee buuxda.
Sicir -dhimis aan warqad lahayn.
Qiimo dhimis haddii baabuurkaagu leeyahay sifooyin ammaan.
Sicir -dhimis ciidan.
Akhri: Dib -u -eegista Caymiska Hiscox: Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad?
Dib-u-eegista Caymiska- Caymiska guriga
Waqtigan xaadirka ah, Clearcover ma iibiso caymiska guriga, laakiin waxay iskaashi la leedahay Caymiska Hippo si ay u siiso xigashooyin caymis oo mulkiileyaal shirkado kala duwan.
Hippo waxaa la aasaasay sanadkii 2017 waxaana siyaasadeeda hoosta ka xariiqay Canopius US Insurance, Spinnaker Insurance Company, iyo Topa Insurance Company.
Maskaxda ku hay in Hippo uu yahay shirkad gabi ahaanba madaxbannaan, oo haddii aad ka iibsato caymiska guriga bixiyahaan, dhammaan arrimaha la xiriira maareynta siyaasadda, sheegashooyinka, iyo adeegga macmiilka waxaa qaban doona Hippo, ma aha Clearcover.
Qiimeynta daboolida cad, dib u eegista, qanacsanaanta macaamilka, iyo cabashooyinka
Sababtoo ah Clearcover waa shirkad si caddaalad ah u cusub oo aan lagu xisaabin shirkadaha caymiska ugu fiican, laguma qiimeyn dhinacyada saddexaad ee hogaaminaya sida JD Power ama AM Best.
Si kastaba ha ahaatee, lammaanaha hoosta ka xarriiqa ee Clearcover Fortegra iyo kaabayaasheeda ayaa leh joogitaan joogto ah oo ku jira warshadaha oo haysta darajada A- (aad u fiican) ee AM Best.
Ururka Qaranka ee Komishannada Caymiska (NAIC) waxay diiwaangeliyeen cabashooyin ka yar celcelis ahaan ku saabsan Clearcover.
Shirkadda waxaa aqoonsaday Better Business Bureau waxayna heshay A+ qiimeyn iyo celcelis ahaan 3.86 dhibcaha qanacsanaanta macaamilka. Qiimeyntan waxaa loogu talagalay kaliya caymiska baabuurka ee Clearcover.
Dib-u-eegista macmiilku waxay muujineysaa qanacsanaanta guud ee helitaanka dhijitaalka ah iyo awood-u-lahaanshaha ay bixiso shirkaddu, laakiin macaamiisha qaarkood waxay muujiyaan sida ay uga xun yihiin in la gaaro wakiilka adeegga macmiilka si loola hadlo arrimaha la xiriira sheegashada.
Sida Loo Joojiyo Siyaasadda Caymiska Daboolida
Tani waxay noqon kartaa su’aasha ugu yar ee aan ugu jecelahay, laakiin waxaan fahamsanahay in Clearcover aysan noqon karin mid ku habboon qof walba. Waad joojin kartaa siyaasaddaada adoo naga soo waca 855-444-1875 ama email noogu soo dir support@clearcover.com.
Si aad u baajiso taleefanka, wac: 855-444-1875
Iimayl u dir support@clearcover.com oo weydii inay baajiyaan koontadaada.
Halkee laga heli karaa caymiska Clearcover?
Tusaha Iibsashada Caymiska Baabuurka
Si aad uga fogaato khaladaadka iyo qoomamaynta waxaad u baahan tahay inaad ururiso macluumaad dhammaystiran oo ku saabsan shirkadda caymiska baabuurka. Macluumaadka sida xaqiiqooyinka ku saabsan baabuurkaaga iyo nooca caymiska la raacayo.
Tusaale ahaan, ma jeclaan lahayd ugu yaraan qaawan ama caymis baaxad leh?
Hubi si aad u xaqiijiso haddii shirkaddu leedahay ikhtiyaarka aad rabto haddii aad maskaxda ku hayso mid.
Marka la isbarbar dhigayo qiimayaasha caymisyada ha ku eekaan fiirinta xadka soo kabashada oo kaliya iyo waxyaabaha laga jaray ayaa sidoo kale fiiro u leh cabashooyinka macaamilka calanka gaduudan ee ku saabsan tayada adeegga laga yaabo inaad hesho.
Clearcover wuxuu cadeeyay inuu yahay bilow la yaab leh. Cabashooyinka ugu yar iyo heerka qanacsanaanta macaamilka ee cajiibka ah.
Laakiin Clearcover maahan qof walba, waxa adiga kuu shaqeeya ayaa laga yaabaa inay ka duwanaadaan. Markaa eeg si aad u ogaato haddii daboolka cad ee Falanqaynta Caymisku kaa caawinayo inaad saxdo sanduuqyadaada.
10 Caymiska Nolosha Ugu Fiican Waayeelka Ka Weyn 80 Sannadka 2022
Dadku waxay u helaan ceymis nololeed sababo kala duwan awgood – sida caadiga ah, si kuwa ku tiirsan ay u helaan xoogaa taageero maaliyadeed…
Waxaan hadda ku noolnahay adduun aan badqabka iyo amniga aan si xad dhaaf ah loo adkeyn karin. Qofna ma aha inuu…
Inaad haysato caymis kaliya kuma dammaanad qaadayso amniga hantidaada laakiin noloshaada. Markaa, waxaad heli kartaa waqti…